Daruuraha Kelvin-Helmholtz | Saadaasha Shabakadda
Daruuraha xiisaha leh ee Kelvin-Helmholtz
Dabeecadda mararka qaar aad ayey u xiiso badan tahay. In kasta oo waxa caadiga ahi noqon lahaa in mawjadaha badda lagu dhex arko, haddana mararka qaarkood cirka waxaa sidoo kale jira hirar. Deganaansho la'aantan waxaa lagu yaqaan magaca Daruuraha Kelvin-Helmholtz.
Aad ayey dhif u yihiin, sidaa darteed qof kasta oo fursad u leh inuu arko waa inuu ogaadaa inay u dambeeyaan wax aad u yar. Markaa ... kaamiradaadu ha diyaar ahaato, ama buuggaaga xusuus qor haddii aad jeceshahay inaad qorto sheeko-curisyo, maadaama daruurahan gaarka ahi ay il fiican oo waxyi ah, sidii ay u ahaayeen ranjiilaha Vincent Van Gogh.
Kumaa daahfuray iyaga sidee bayse u samaysan yihiin?
Daruuraha Kelvin-Helmholtz waxaa daahfuray Baron Kelvin kii ugu horreeyay, iyo fiisigiste Hermann von Helmholtz. Waxay u egyihiin hirar badda jabinaya, sax? Hagaag, waxay dhab ahaan u sameystaan ​​qaab la mid ah. Markay lakabka hoose ka cufan yahay ama uu ka xawaare hoose yahay kan kore, yaababkan cirka ayaa soo muuqda.
Goorma ayey is arkaan?
Waxay sameysmayaan maalmo aad u dabeyl badan, marka miisaanka hawadu leeyihiin cufnaan kaladuwan. Sidoo kale waa la arki karaa tusaale ahaan inta lagu jiro duufaannada kuleylaha.
Sida kor ku xusan, sidaas hoose
Waana taas mahaddeeda fiisikiska ee xasillooni darradaan xiisaha leh, dayax gacmeedyada cabiraya xawaaraha dabaysha ee bada. Sidaa darteed, waxay si sax ah u ogaan karaan sida sare ee hirarka ay gaari doonaan inta lagu jiro duufaanka, tusaale ahaan.
Habeenkii Xiddigaha, waxaa qoray Vincent Van Gogh
Miyaad moodday inaan kaftamaynay? Waa hagaag halkan caddaynta ah in daruuraha Kelvin-Helmholtz ay sidoo kale u adeegaan il waxyoon. Waxaa la rumeysan yahay inay dhiirrigeliyeen rinjiyeyaasha Vincent Van Gogh, taas oo ay ugu wacan tahay inuu abuuray mid ka mid ah farshaxankiisa: Habeen xiddig leh.
Laakiin, marka lagu daro, iyaguna way kugu dhiirrigalin karaan qor riwaayad. Wax walba waa arrin mala awaal ah.
Weligaa ma aragtay daruurahaas? Ma ogeyd iyaga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Daruuro » Daruuraha xiisaha leh ee Kelvin-Helmholtz
Xayawaanka khatarta ugu jira dabargoynta adduunka